Urur ayaan aasaasey | Vaikuttajan reittikartta
Urur ayaan aasaasey
Qof kasta oo Finland ku nool wuxuu xaq u leeyahay in ay isabaabulaan oo ururro sameystaan. Abaabulida ururrada waa mid u qalma in aad ka fekirto haddii adiga ama kuwa kale aad la wadeegto sabab sharci ah, fekrado ama hoobi ee aad jeceshahay in aad si wadajir ahan isla matashaan. Waxaa jira ururro kala duwan oo badan, sida mid siyaasad, isboortis iyo dhaqamo iyo sidookale ururo sama-fal.
Way sahlan tahay in urruro Finland laga aassaaso. Ururka waxaa heli kara ugu yaraan seddex qof (dhamaantooda oo la doonaayo in ay ahaadaan 15 jir ahaadaan ama ka weyn), balse waa fekrad wanaagsan in la helo dad badan. Guddoomiyaha guddiga ururka waa in uu ahaadaa 18 jir ama ka weynaadaa. Muwaadiniinta ka yimid wadamada kale ee ku Finland ku nool ayaa sidoo kale abaabuli kara, ku biiri kara oo ururka ka noqon kara guddi urur. Guddoomiyaha guddiga iyo guddoomiye ku xigeenka guddiga ururka waa in uu ahaadaa mid si joogto ah u degan Finland.
Macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida urur loo aassaaso waxaad ka heli kartaan bogga Diiwaan-gelinta Ururada (Yhdistysrekisteri) iyo sidoo kale Guddiga Qaxootiga Finnish booggagooda internetka ee Mashruuca Ururka Taageera Ganacsatada Cusub (Pakolaisavun Järjestöhautomosta).